Ungaskena kanjani amakhodi e-QR kuselula yakho ngokushesha | Iforamu yeselula
U-Ignacio Sala | 19/11/2021 12:00 | Android, Izinhlelo zokusebenza
Amakhodi e-QR eminyakeni yamuva nje abe indlela ephelele yokwenza ulwazi oluthe xaxa, ngokuvamile nge-inthanethi ngaphandle kokuthi ubonise i-URL okungakhonjwa muntu kuyo. Ukuze sifinyelele iwebhu ehlotshaniswa nekhodi ye-QR, sidinga kuphela uhlelo lokusebenza noxhumo lwe-inthanethi.
Uma ufuna ukwazi ungaskena kanjani amakhodi e-QR kuselula yakho, kungaba yi-iPhone noma i-Android, ngezansi sikubonisa izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu ongayenza. Kodwa, futhi, uma bekunikeza ikhodi ye-QR nge-imeyili, sizophinde sikubonise ukuthi kanjani skena ikhodi ye-QR kukho kokubili iWindows ne-Mac.
Amakhodi we-QR hhayi kuphela isixhumanisi ekhasini lewebhu, kodwa, ngaphezu kwalokho, bangakwazi nokwenza imisebenzi efana nokushaya inombolo yocingo, ukuvula iklayenti le-imeyili nge-imeyili yomamukeli, ukuxhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi ...
1 Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-iPhone
1.1 Azikho izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle
1.2 Iwijethi ye-Google Chrome
1.3 Ikhodi ye-QR - I-QR Reader & Scanner
1.4 I-QR nesifundi sebhakhodi
2 Ungawaskena kanjani amakhodi we-QR ku-Android
2.1 Iwijethi ye-Google Chrome
2.2 I-QR ne-barcode reader
3 Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-Windows
4 Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-Mac
Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-iPhone
Azikho izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle
Ukuskena amakhodi e-QR ku-iPhone, asikho isidingo sokufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza, njengoba, ngokwendabuko, i-iOS ikuvumela ukuthi ubone amakhodi e-QR ngekhamera, inqobo nje uma sike senza umsebenzi wasebenza ngaphakathi kwezinketho zekhamera.
Ukuze wenze kusebenze umsebenzi wokuqaphela i-QR, kufanele siye ku Izilungiselelo.
Ngaphakathi Kwezilungiselelo, sifinyelela inketho Ikhamela.
Kumenyu Yekhamera, kufanele senze ibhokisi lisebenze Skena amakhodi we-QR
para bona amakhodi e-QR Ngekhamera ye-iPhone noma i-iPad yethu (lo msebenzi utholakala kuwo womabili amadivayisi), kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Okokuqala, kumele vula uhlelo lokusebenza lwekhamera bese ukhomba ikhodi ye-QR.
Uma usuyibonile ikhodi ye-QR, a isimemo sokuvula ikhodi ye-QR ngesiphequluli kunqunywe kusengaphambili.
Iwijethi ye-Google Chrome
Yize indlela yomdabu ehlinzekwa yi-iOS ilungile futhi ishesha ukuskena amakhodi e-QR ku-iPhone, singakwazi futhi sebenzisa izinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle, njenge-Google Chrome, ikakhulukazi ngewijethi etholakalayo.
para bona ikhodi ye-QR ngewijethi ye-Chrome, kufanele silandele izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Uma sesiyifakile iwijethi ye-Chrome ku-iPhone yethu, chofoza ku- inketho yesithathu yewijethi, lowo ongakwesokudla kwemakrofoni ukuze ufinyelele ikhamera ukusuka ku-Chrome.
Okulandelayo, kufanele skena ikhodi ye-QR ngokuyibeka ebhokisini okusibonisa ukuze i-Chrome ibone ikhodi futhi ivule ngokuzenzakalelayo ikhasi lewebhu elihambisanayo.
Landa Ikhodi ye-QR
Ikhodi ye-QR - I-QR Reader & Scanner
Uma ufuna gcina irekhodi lawo wonke amakhodi e-QR uma uskena, ungasebenzisa uhlelo lwe-QR Code, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala, alufaki izikhangiso nanoma yiluphi uhlobo lokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Lolu hlelo lokusebenza kwenza lokho kuphela, bona amakhodi e-QR futhi ugcine irekhodi elinawo wonke amakhodi e-QR askeniwe, umlando esingawususa ngokukhetha noma wonke amarekhodi ndawonye.
Umthuthukisi: Wen Studio
I-QR nesifundi sebhakhodi
Uma ufuna funda futhi udale i-QR namabhakhodi ku-iPhone yakhoNgaphandle kokusebenzisa iwebhusayithi, olunye lwezinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu ezitholakala ku-App Store i-QR kanye nesifundi sebhakhodi, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala futhi oluhlanganisa ukuthenga okukodwa ukuze sivule yonke imisebenzi.
Lolu hlelo lokusebenza ingenye ezimbalwa ukuthi akubandakanyi okubhaliselwe okujabulisayo Onjiniyela sebejwayele, kodwa hhayi abasebenzisi.
Lapho siklama ikhodi ye-QR, singakwazi iFaka sobabili isithombe sethu, njengesithonjana seplathifomu exhumeka kuyo, uma ngokwesibonelo kuyi-akhawunti yethu ye-Twitter.
Ngaphezu kwalokho, kusivumela ukuthi sithole ulwazi mayelana nemikhiqizo uma sesiskena ibhakhodi. Kufaka phakathi umlando wokuskena esingakwazi ukuthekelisa ngefomethi ye-.csv, silondoloze amakhodi e-QR njengezithombe ...
Ungawaskena kanjani amakhodi we-QR ku-Android
Njengenguqulo ye-Chrome ye-iOS, inguqulo ye-Android, futhi kusivumela ukuthi sibone amakhodi e-QR ngokusebenzisa iwijethi etholakalayo ye-Android. Ukubona ikhodi ye-QR ngewijethi ye-Chrome, sizokwenza izinyathelo engikubonisa zona ngezansi.
Uma sesiyifakile iwijethi, uma besingazange siyifake, chofoza isithonjana sokugcina esimele ikhamera.
Bese kuthi uma ikhamera isivuliwe, sigxile kukhodi ye-QR ukuze, uma sekubonakele, livule ngokuzenzakalelayo ikheli elikhomba kulo noma lenze isenzo esihambisanayo.
Njengoba i-Chrome ifakiwe ngokwemvelo kuwo wonke amatheminali e-Android afika emakethe, lokhu yisixazululo esisheshayo nesilula sokuskena amakhodi e-QR ku-Android.
I-QR ne-barcode reader
Lolu uhlelo lokusebenza olufanayo olutholakalayo futhi ku-iOS, uhlelo lokusebenza oluphelele esingakwazi ngalo dala futhi ufunde zonke izinhlobo ze-QR namakhodi ebhakhodi.
Lapho sidala amabhakhodi, singakwaziengeza izithombe kumakhodi e-QR esikudalayo, sigcina umlando wawo wonke amakhodi e-QR namabha esiwaskenayo, umlando esingawuthumela kufomethi ye-.csv ukuze sakhe amathebula futhi sengeze izihlungi.
Lolu hlelo lokusebenza ingalandwa ngokuphelele mahhala futhi kufaka phakathi ukuthenga kwangaphakathi nohlelo evula yonke imisebenzi esinikezwa yisicelo nokuthi miningi.
I-QR ne-barcode reader (iSpanishi)
Ngingaqhubeka ngikhuluma izinhlelo zokusebenza zamahhala ezinezikhangiso nokuthenga Ngaphakathi kwesicelo sokuskena amakhodi e-QR, nokho, nginqume ukungakwenzi futhi ngikhulume ngalokhu kokugcina, njengoba kuphelele kunakho konke, njengoba kusivumela futhi ukuthi sakhe amakhodi e-QR futhi akudingi ukubhaliswa kwanyanga zonke.
Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-Windows
Ngokusebenzisa ikhamera yewebhu kukhompuyutha yethu ye-Windows, singakwazi skena noma iyiphi ikhodi ye-QR sibonga uhlelo lwe-QR Scanner Plus, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala ngesixhumanisi engisishiya ngezansi.
Uhlelo lokusebenza lwe-QR Scanner Plus igcina irekhodi eliphelele yayo yonke imikhiqizo ebonwa uhlelo lokusebenza futhi isivumela ukuthi sikhiphe idatha kufayela ngefomethi ye-csv, esingayivula kamuva ku-Excel futhi sisebenzise izihlungi, amafomula ...
I-QR Scanner Plus
Ungaskena kanjani amakhodi e-QR ku-Mac
Kuma-macOS siphinde sibe ne- isicelo sokufunda amakhodi e-QR ngekhamera yewebhu ye-Mac yethu. Ngikhuluma ngohlelo lokusebenza lwe-QR Journal, uhlelo lokusebenza esingalulanda mahhala, alufaki noma yiluphi uhlobo lokuthenga.
Umthuthukisi: UJosh Jacob
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Izinhlelo zokusebenza » Ungaskena kanjani amakhodi e-QR kuselula yakho ngokushesha
Ukuthola kabusha iphasiwedi ye-Gmail: zonke izinketho